China Camouflage RPET Bag 100% Recycled Material Pocket Sport Style Running Bag Portable Cool Fashion messenger bag maka unisex ụlọ ọrụ na ndị na-ebu ya | Changlin
Ozuzo RPET akpa 100% recycled ihe n'akpa uwe Sport Style agba ọsọ akpa Portable Cool Ejiji ozi akpa maka unisex
Rkpụrụ RPET a bụ ozuzo nke dị ka onye agha.
Ihe onwunwe: RPET Arọ:
Nha: 36.5L * 9.5W * 17Hcm Mmechi: zipa
Ebe Mmalite: GUA, CN Port: Shenzhen ， GZ, HK
MOQ ： 5000 Ngwaahia: Nabata
Ngwa: ịzụ ahịa, ịgba ọsọ, kwa ụbọchị
Advantage: Ozuzo, Portable, Ejiji, ọtọ, biodegradable
Guzosie ike na 2017, Changlin bụ alaka ụlọ ọrụ nke Jiafeng Plastic Products CO., LTD nke nwere ihe karịrị afọ 20 ahụmahụ nke akpa na-eme akpa a bụ RPET 100% mmeghari ohuru. ndụ kwa ụbọchị na ejiji maka ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị.
Micro Side Anya
Thedị ozuzo a na-eme ka a dị jụụ. Inside akpa, e nwere ihe ọzọ obere oyi akwa na mkpọchi uwe mmechi itinye ụfọdụ dị mkpa akụ kaadị, wdg nke bụ nnọọ ihe bara uru na imewe bụ ụdị.
Dị ka ikike, O zuru ezu maka ndị mmadụ mgbe ị na-agba ọsọ na ịzụ ahịa. Nha ya bụ 36.5L * 9.5W * 17Hcm nke nwere ike itinye ekwentị gị, ala mmiri, anụ ahụ, wdg.
Isi ụzọ abụọ na-adaba adaba maka ndị nwere àgwà dị iche.
Nke a imewe bụ nnọọ obiọma kwesịrị ekwesị ka ndị mmadụ na dị iche iche shapes.It dị mfe na-ebu na gbapụ.
Anyị ụlọ ọrụ bụ ọkachamara maka akpa producing.With mmụọ nke "nraranye, ọhụrụ, imekọ ihe ọnụ, na-arụsi ọrụ ike" na-arụ ọrụ ịke nke ịbụ "oru oma, iwu, nkwukọrịta, pụtara ìhè", ndị ọrụ niile na-enye ndị ahịa ọhụrụ na ndị ọhụrụ products ga-enwe ọtụtụ ndị ọkachamara ga - ejere gị ozi!
Nke gara aga: RPET na nbipute ihe eji achọ mma nke na-agbakọ akpa ifuru mpempe akwụkwọ mpempe akwụkwọ mpempe akwụkwọ
Osote: Azụ RPET akpa 100% recycled ihe n'akpa uwe Sport Style agba ọsọ akpa Portable Cool Fashion ozi akpa maka unisex
The hazie ọrụ na Changlin-agba mbọ ka na-amị pụrụ iche, elu àgwà si ịchọ mma akpa na-ekwe nkwa na azụmahịa gị mma ọ bụla oge.
Ndị otu anyị na-arụ ọrụ nke ọma na gị iji mepụta ngwọta ka mma, na-eji usoro nwere ike ịmegharị na nke nwere ike imegharị na usoro kachasị mma. Anyị nwere ike ịmepụta nha ọ bụla na ọdịdị nke akpa ịchọ mma, site na ụdị ụdị ihe ndị na-adigide, mbipụta siri ike, usoro ọhụụ, dịka nkọwa gị.
Site na mmebi gburugburu ebe obibi na-abawanye ka ụlọ ọrụ na-eto, na echiche nke mmepe na-adigide, ugbu a, ejirila ọtụtụ ihe omume gburugburu ebe obibi mee ihe n'ọtụtụ ebe: Organic or natural Cotton and linen are anywhere anywhere, RPET Material is on the ụzọ, mgbe Recycled EVA ma ọ bụ Recycled TPU ga-abụ ihe ọhụrụ. A na-azụlite ihe ndị na-emepụta ihe ọkụkụ dị ka osisi painiapulu na akwa banana ma tinye ha n'ọrụ. Changlin gbara mbọ inye ndi ahia anyi ihe ohuru na ihe ohuru ohuru, mepee ihe ndi ozo na gburugburu ebe obibi, ma na-enye ike nke anyi maka nchedo gburugburu ebe obibi.
Fashion Pu ntecha ntecha akpa ezumike packagi ...
Yi polyester Bag emefu Mmechi Inogide C ...
TPU ịchọ mma akpa Eco-enyi na enyi Degradable Iride ...
Eco-enyi na enyi recycled Eva 3D eyelets ihe c ...
Cotton Kanvas Bag Travel Makeup ịchọ mma Bag wi ...
Cotton akpa maka ntecha ụlọ ahịa ọtọ